Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0512 lak
Naseho ilay mpamono olona
Alakamisy 01 Nov.
Tonga teto amin’izao tontolo izao i Kristy mba handrava ny asan’ny ratsy (Heb. 2:14). Teo amin’ny hazo fijaliana no nanatanterahany izany. Raha toa àry ka efa azon’i Kristy ny fandresena ny devoly sy ny fanapahana sy ny fahefana, nahoana isika no mbola mitolona amin’ny fanapahana sy ny fahefana ihany? Nahoana ny devoly no mbola mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany?
Diniho tsara ny Kôl. 2:15. Jereo ireo matoanteny telo samy hafa izay ampiasain’i Paoly hitantarana ny zava-nitranga teo amin’ny hazo fijaliana. Ahoana no fahazoantsika ny tiana hambara?
Voalohany, “noravan’” i Kristy (DIEM) na “nesoriny” ny “fanapahana sy fanjakana”. «Apekduomai» no teny grika nampiasaina, izay midika ara-bakiteny hoe “manala akanjo”. Mety hidika izany eto fa nesorina hiala tamin’ireo fahefana sy fanapahana ireo ny fiadiany.
Fiadiana inona izany? “Naneho ny faharesen’ny devoly ny fiainam-pandresen’i Kristy, izay nahatratra ny fara tampony teo Kalvaria. Voaaisotra terỳ ny saron-tavan’i Satana. Nibaribary teo imason’ny anjely sy ny mponin’ny lanitra iray manontolo ny tetik’adiny. Niharihary amin’izay ny tena maha-izy azy marina.... Tamin’ny alalan’ny hazo fijaliana, dia nesorin’i Kristy tsy ho eo amin’ny fanapahana sy ny fahefan’ny haizina intsony na ny fitafiany na ny fahefany amin’ny maha-andrianan’izao tontolo izao azy, ary ny ankanjo vy fitondrany amin’ny ady ataony amin’ny fahamarinana.” - SDABC, b. 7, t. 205.
“Nasehon’i Kristy miharihary” ireo “fanapahana sy fanjakana”. Ahoana no fomba nanehoana an-karihary an’ireo fanapahana sy fanjakana teo amin’ny hazo fijaliana? Inona no sarin’izy ireo manjary hita mibaribary tokoa? Jereo ny Jao. 8:44.
Voalazan’ny andininy ihany koa fa “nandresy azy ireo” i Kristy. «Thriambeuo» no teny grika nampiasaina ary midika ho fankalazana izany. Zava-miafina lehibe tokoa izany eto: Nihantona teo amin’ny hazo fijaliana i Jesôsy, nihatra Taminy ny toa faharesena mahatsiravina, kanefa fandresena hoe no iantsoan’ny Baiboly azy eto? Na inona na inona zavatra hafa tafiditra ao anatin’izany fandresena izany, dia azo antoka fa nanampy hampiseho an’i Satana ho ilay mpamono olona araka ny efa nilazan’i Jesôsy azy izany.
Noho ny hazo fijaliana, dia ho avy ny andro izay haharava tanteraka ny fanjakan’ireo fanapahana sy fanjakana ireo. Izany dia amin’ny fotoana “hanafoanan’i Kristy ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra” (1 Kôr. 15:24), ka ny fahafatesana no fahavalo farany horesena (1 Kôr. 15:26). Nanomboka teo, dia tsy maintsy miharitra isika, miady ny adin’ny finoana amin’ny alalan’ny herin’Andriamanitra atolotra ho an’izay rehetra mitaky izany.
Taorian’ny fahafatesan’i Kristy, dia “Hitan’i Satana fa afaka ny nanaronany ny fitaka nataony. Mivelatra mivandravandra eo anatrehan’ireo anjely tsy nanota sy eo anatrehan’izao rehetra izao any an-danitra ny fomba fitondrany. Tamin’ny nandatsahany ny ran’ny Zanak’Andriamanitra, dia nanongotra ny tenany tsy ho tian’ireo mponina any an-danitra intsony izy. Hatramin’izay dia voafetra ny asany. Na inona na inona fihantsiany, dia tsy ho azony hatao intsony ny hiandry ireo anjely raha avy any amin’ny lapan’ny lanitra ireo, ary hanameloka ny rahalahin’i Kristy eo anatrehany, izay lazainy fa mitafy ny fitafian’ny fahamaizinana sy ny loton’ny fahotana. Tapaka ny fatorana farany nampiray fo an’i Satana sy izao tontolo izao any an-danitra.
“Nefa tsy mbola naringana i Satana tamin’izay. Na dia ny anjely aza tamin’izay, dia tsy nahatakatra ny amin’izay rehetra mety ho voafaoka ao anatin’ity ady lehibe ity. Tsy maintsy naseho tamin’ny fomba feno kokoa ireo foto-kevitra nifanandrina. Ary noho ny amin’ny olombelona, dia tsy maintsy mbola hitohy ny fisian’i Satana. Tsy maintsy ho hitan’ny olona ary tahaka izany koa ny anjely, ny fahasamihafana misy amin’ny Andrianan’ny Mazava sy ny andrianan’ny maizina. Tsy maintsy mifidy izay hotompoiny izy.” – IFM, t. 821.